OK Zimbabwe Archives - The Source
Ok Zimbabwe CE Zireva retires
HARARE, Feb 1 (The Source) – OK Zimbabwe, the country’s largest retail group, has announced the retirement of long-serving chief executive Willard Zireva. In a Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) filing on Wednesday, OK Zimbabwe said Zireva would leave the company at the end of March.… Read More
HARARE, June 6 (The Source) – OK Zimbabwe reported an 88 percent decline in operating profit at $1,3 million for the year ended 31 March 2016 compared to $10,7 million in prior year as the increasingly competitive retail sector contends with declining consumer spend. Profit after… Read More
2 years ago by AlfonceRetail
HARARE, November 13 (The Source) – The country’s largest retailer, OK Zimbabwe on Thursday reported a nearly 72 percent fall in net profit to $1,2 million for the six months to September 30 as liquidity in the economy tightened and household incomes plummeted. Chief executive… Read More
3 years ago by AlfonceRetail
HARARE, May 22 (The Source) – OK Zimbabwe, the country’s largest retailer, on Friday reported a 22,2 percent decline in after-tax profit in the year-ended March 2015, largely attributable to persistently depressed consumer demand. After-tax profit was $7,5 million, down from $9,7 million in 2014,… Read More
OK Zimbabwe HY revenue down 5pct
HARARE November 13 (The Source) – Zimbabwe’s largest retailer ,OK Zimbabwe has recorded a 4.8 percent decline in revenue to $232 million for the half year ended September 30, reflecting weakening consumer spending in the economy. Net sales were down 4.8 percent to $231 million… Read More